हजार गीतमा आवाज दिने खड्ग गर्बुजाः पानी खायो बाघैले ! | BeniOnline.com.np जिल्लाका ताजा अनलाइन समाचार
Home स्थानिय समाचार म्याग्दी समाचार हजार गीतमा आवाज दिने खड्ग गर्बुजाः पानी खायो बाघैले !
हजार गीतमा आवाज दिने खड्ग गर्बुजाः पानी खायो बाघैले !
२०७४, ६ माघ शनिबार २२:३७
गीत त गीत नै हो, गाउँका खेतालाहरु पनि गीत गाउँथे । घाँसदाउरा, पराल बोक्दा होस् या चौतारीमा थकाइ मार्दा होस्, वा उकाली-ओराली गर्दा, मानिसहरु सुसेल्थे- झ्याउरे, सालैजो वा कुनै मन परेको लोकभाका । मेलापातमा पसीना र थकाइ भुलाइदिने गतिलो माध्यम थियो- लोकगीत । गाईबाख्रा चराउँदै गोठालाहरु कुनै रुखको हाँगामा बसेर बजाउँथे पात । वनका पातहरुले स्वयं निकाल्थे धुन । खोला स्वयं छङछङ भथ्र्यो संगीत । गाउँका प्रत्येक चिजले गाएझैं लाग्थ्यो शब्दहरु, निकाले झैं लाग्थ्यो अनौठो धुन ।
जति नै रमाइलो माने पनि यी गीतहरुमा, जति नै रमाए पनि गाउँपाखाहरुमा, अनि जति नै नाचे पनि गाउँबाट निस्कने यस्ता धुनहरुमा रमाइलो लाग्दो रहेनछ आˆनै पेटको सारंगीको आवाज । बडो र्क्रकश लाग्ने रहेछ अभावहरुको चिच्याहट ।
गर्बुजा पीडामै दुखिरहेको भए, अँध्यारोमै रुमलिरहेको भए, जीवन खत्तमै भयो भनेर बसिरहेको भए उनले आज यो उचाइ प्राप्त गर्ने थिएनन् । ‘जति रुनु थियो रोएँ, धेरै भयो मैले रुन छाडेको,’ गर्बुजा भन्छन्, ‘जीवन त हाँसेरै जीउने हो, अब छोराछोरीलाई हाँस्न सिकाउँदैछु ।’ copyright: onlinekhabar.com
२०७४ माघ ६ गते १७:१७ मा प्रकाशित
Previous articleनगरपालिकाद्धारा नवनिर्वाचित सांसद्लाई सम्मान
Next articleउपन्यासकार तीर्थ गुरुङसँग साक्षात्कार कार्यक्रम